Public Enemy Returns (2008) | MM Movie Store
စုံထောကျ မှုခငျးကားကွိုကျသူမြားအတှကျ ဟာသ မှုခငျး အကျရှငျ ရသစုံတဲ့ ရှပျရှငျကောငျးတဈခုပါဇာတျလမျးအကဉျြးလေးတော့ စုံထောကျဂနျခြောဂြှနျဟာ အလုပျမှာ ပွသနာအခြို့ကွောငျ့ ဆိုငျးငံ့ခံထားရပွီးငှရေေးကွေးရေးပါ အဆငျမပွလောတဲ့ခါ ရဲအလုပျကနေ ထှကျဖို့လုပျခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဂနျခြောဂြှနျရဲ့ အထကျလူကွီး အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျဟာ ထှကျခှငျ့မပေးဘဲအထကျတနျးကြောငျးသားလေး ဂြောငျဟာယှနျး အသဆျခံရတဲ့ အမှုကို စုံစမျးဖို့ ပါဝငျစခေဲ့ပါတယျ။
အရာရာကို စိတျကုနျနတေဲ့ ဂနျခြောဂြှနျဟာတဖနျအမှုပွနျလိုကျရငျးက သဲလှနျစရခဲ့ပွီး ဟာယှနျးရဲ့ သူငယျခငျြး၃ယောကျကို စဈဆေးကွညျ့လိုကျတော့….
ကြောငျးသားတှကေို လကေ့ငျြ့ပေးပွီး အလုပျလုပျခိုငျးနတေဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခုကို သိလိုကျရတဲ့အခါရာဇဝတျမှတျတမျးရှိတဲ့ ကုမ်ပဏီ ဥက်ကဌ လီဝမျဆုကို ထိပျတိုကျရငျဆိုငျရငျး အမှုဘယျလိုဖျောထုတျမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရှုရမှာပါ။
စုံထောက် မှုခင်းကားကြိုက်သူများအတွက် ဟာသ မှုခင်း အက်ရှင် ရသစုံတဲ့ ရှပ်ရှင်ကောင်းတစ်ခုပါဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးတော့ စုံထောက်ဂန်ချောဂျွန်ဟာ အလုပ်မှာ ပြသနာအချို့ကြောင့် ဆိုင်းငံ့ခံထားရပြီးငွေရေးကြေးရေးပါ အဆင်မပြေလာတဲ့ခါ ရဲအလုပ်ကနေ ထွက်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဂန်ချောဂျွန်ရဲ့ အထက်လူကြီး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာ ထွက်ခွင့်မပေးဘဲအထက်တန်းကျောင်းသားလေး ဂျောင်ဟာယွန်း အသဆ်ခံရတဲ့ အမှုကို စုံစမ်းဖို့ ပါဝင်စေခဲ့ပါတယ်။
အရာရာကို စိတ်ကုန်နေတဲ့ ဂန်ချောဂျွန်ဟာတဖန်အမှုပြန်လိုက်ရင်းက သဲလွန်စရခဲ့ပြီး ဟာယွန်းရဲ့ သူငယ်ချင်း၃ယောက်ကို စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့….
ကျောင်းသားတွေကို လေ့ကျင့်ပေးပြီး အလုပ်လုပ်ခိုင်းနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို သိလိုက်ရတဲ့အခါရာဇဝတ်မှတ်တမ်းရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဌ လီဝမ်ဆုကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရင်း အမှုဘယ်လိုဖော်ထုတ်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပါ။